Qiil ma Leh Qabyaaladiye Bedbaadada Qaranka U Codee Muwaadin.!!! - somalilandlivemedia
12:50 17. October 2017
Waxaa aynu gaadhney xiligii ummadu ka tashan lahayd mustaqbalkooda iyo hogaanka ay doonayaan in uu baahiyahooda faraha badan wax qabto dooran lahayeen. Waxa ka hadhay mudadii aynu u mudeysanay in dalka ay ka qabsoomaan doorashadii Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland.Somalialand oo sida aynu wadda ognay qabsoomi doonta idanka Illahay 11/13/2017. Waxa ummada la gudboon in ay ka wadda shaqeeyaan sidii ay doorashadaasi ugu qabsoomi lahayd xasilooni iyo cadaalad. Waxay masuuliyadu ka saarantay dhamaan ummada reer Somaliland, gaar ahaana indheer garadka iyo masuuliyiinta ay bulshadani bidayso wax.
Dalka waxa ka socda xamaasado ku salaysan qabiil oo aan soo wadin wanaag. Wakhtigii xukuumadda Xusbiga Kulmiye uu doorashada ku jiray waxa uu inagu soo kordhiyey nidaam ku dhisan Qabiil, oo waa kii sida beeleysan ugu shiray Gar-Adag ee xulufada qabiilka ku dhisan dalka ay ku maamulayaan ilaa maanta. Kulmiye ayaa inoo hor seeday nidaamkan beelaha ee aan caafimaadka iyo samaha shaqada ku lahayn, balse maanta ayey inala gudboontay in aynu wax ka bedelo nidaamkaas oo aynu wax ku doorano nidaamkii dimuqraadiyada ee qofku ku dooranayey hogaanka uu bidayo in uu wax ka qabanayo mushkiladaha caamka ah ee ummada iyo dalkaba dib u dhigay.
Hadaba si aynu uga badbaadno haraatida qabiilka iyo xulufada ku dhisan caqliyada kaligeed cuurashada ah , waa in wax garadka iyo aqoon yahanada iyo dhamaan hogaanka ururrada bulshada u adeegaa ay xil weyn isaga saaraan sidii ummada loo wacyi gelin lahaa ee loogu baraarujin lahaa in ay wax ku doortaan mabda iyo nidaam ka madax banaan qabiilka. Maanta xaalada dalkeenii ku sugan yahay maaha mid laga aamuso ama la dhayalsado waxa socdaa maanta dhaxalka ay reebi karaan. Hadaba dadka wax garadka ahi taariikhda danbe ee ummadan ha eegaan oo fadhiga ha ka kacaan hana badbaadiyaan qarankan waana in lagga fogaadaa aafada qabyaalada leedahay.
Waxa aynu nahay ummad leh intii ummadi lahaan jirtey, waa daruurin in aynu caqliga iyo aqoonta ka shaqaysiinaa maanta , waana wakhtigii ugu haboonaa ee aynu caqliga caamka ah in aynu ka shaqaysiino ummadeenu u baahnayd si looga badbaadiyo dhibaato laga yaabo in aan dib looga soo kaban. Hadaba miyaaan loo baahnayn in aynu noqono ummad inagu ku baraarugsan wakhtiga iyo duruufaha maanta taagan, mase ka faa’iidaysan karaa fursadan maanta oo doorashadan dalka ka dhacaysa wax ma ku bedeli karaa si ummadeenu uga baxdo dhibaatada daashatay. Is bedelka ummadi gaadho waxa ay sameeyaan xiligan aynu ku jiro ee doorashada loo taaganyey.
Shacbigeena dhibataysan ayey gacantooda ku jirtaa in ay maanta ka baxaan dhibaatada ama ay sii kororsadaan duruufahan qalafsan ee la deriska ahaa mudada dheer. Xalku waxa uu ku jiraa maanta oo ay ummadu ka tashato ayahooda oo ay doortaan hogaan ay ku aaminaan guud ahaan danahooda bulsho . Sida kaliya ee aynu ku dhisan karaa nidaam dawladeed oo qaan gaadhi waa maanta oo ay si caafimaad qabta u doortaan hogaamiye dhaqi kara oo sugi kara cadaalada ummadani u baahantay.
Qabyaalada la’aan oo aad maanta wax ku doorato ayey guusha caamka ahi ku jirtaa, dalkanina horumar ku gaadhi karaa ee waa in dadku eegaan cida ay ku haboontay in ay u foodaan una hiiliyaan maanta.
Amiin Dahir Caynanshe
Deg Deg Daawo Rasiil wasaaraha somalia xasan ali Kheyre Oo Shaqada Ka Eryay Wasiirro uu Kamid Yahay Yuusuf Garaad
Halka Ka Daawo Siyaasi Somaliland Kasoo Jeeda Oo Muqdisho Lagu Diley Iyo Ka Hor Intii Aan La Dilin Oo Uu Sheegay In La Dileyo
Newer Post Halkan Kadhagayso Siyaasi Kajawaabay Hadalkii, Koofiyad Bacle Buurmadow, oo Beelaha Somaliland Qaarkood kusheegay kuwo Bilaa Xiniiyo ah, Ama Dhedig-
Older Post .KULMIYE Wadadii Cidlada ahayd ee Goroyaxunta sare ayuu Qaaday..” Siyaasi Muniir Axmed Cigaal